Ngo-Meyi we-9, ngo-2018, uMnu. Tang yurong, uSvenska kullager-fabriken weqela elisekela Mongameli kunye noMongameli we-SKF Asia, kunye noMnu Wang wei, uMongameli weSebe lezentengiso lezentengiso laseSKF China batyelele iShanghai kaiquan egameni leqela leSKF.
Umnumzana Wang jian, usekela-Mongameli weqela le kaiquan, wazamkela ngobubele iindwendwe wabaxelela ngenkqubo yophuhliso yeqela lika kaiquan. Umnumzana Wang uhambisane neendwendwe ukuya kutyelela indlu yokumpompa kaiquan kunye neqonga elinamafu elinengqiqo kwaye benza intshayelelo eneenkcukacha. La macala mabini avakalise iinjongo zabo zokuqhubela phambili nzulu kwintsebenziswano.
Umnumzana Lin kaiwen, usihlalo weqela le kaiquan, uthathe isigqibo sokuqhuba ngokubambisana kule micimbi ilandelayo ngokwendlela esele isetyenzisiwe yokusebenzisa uphawu emva kokuxoxa nabameli beqela le SKF:
1. Yandisa intsebenziswano ngobuchule kunye nokwandisa ngokupheleleyo intsebenziswano kwiimveliso ezininzi, amaqonga kunye nakumashishini;
2. Ukomeleza unxibelelwano lobuchwephesha, kubandakanya nophuhliso lwemveliso entsha, ukuphuculwa kwemveliso kunye nokwenza ngcono uyilo;
3. Yenza intsebenziswano enzulu ekubekweni kweliso kwizixhobo ezijikelezayo. Usebenzisa oovimba bolwazi bamaqela omabini kwiinkalo ezahlukeneyo, phuhlisa iskim sokuqina sokuvavanya ukusebenza kwezixhobo ezijikelezayo ezisebenza kushishino lwempompo lwase China; Sebenzisa idatha enkulu kunye nokulungiswa kwelifu kuthetha ukunceda abathengi bafezekise ukubonakala kunye nokuqikelelwa kokujikeleza kwezixhobo zokusebenza.
I-SKF ngumenzi ophambili kwihlabathi weebheringi eziqengqelekayo, ezisebenza kumazwe ali-130 nangaphezulu kwezigidi ezingama-500 zeebheringi eziveliswa minyaka le. I-Shanghai kaiquan, njengeshishini eliphambili kushishino lwempompo lwasekhaya, iya kwenza iinzame ngokudibeneyo ne-SKF ukufezekisa impumelelo enkulu kuphando lwemveliso kunye nophuhliso, ukwenziwa kunye nokuphuculwa. Masilinde sibone!